जापान मा अप्रिल! हिउँ परिदृश्य, चेरी फूल, नेमोफिलिया .... - Best of Japan
जापानको हिरोसाकी, अओोरी, जापानमा शेरस्टक
अप्रिलमा, टोकियो, ओसाका, क्योटो र अन्य शहरहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा सुन्दर चेरी खिल्यो। यी स्थानहरूमा मानिससँग भीडहरू छन् जो तिनीहरूलाई हेर्न बाहिर जान्छन्। त्यस पछि, नयाँ सिउँदो नयाँ शहरले यी शहरहरूलाई भर्नेछ। चाँडै, तपाईले धेरै नै काईका साथै फूल्दा ​​नेमोफिला फेला पार्नुहुनेछ। अप्रिलमा तपाईले धेरै रमाइलो यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई परिचय दिनेछु कि कस्तो प्रकारको यात्रा तपाईंले अप्रिलमा अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
अप्रिलमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो को जानकारी
तपाईं केहि स्की क्षेत्रमा वसन्त स्कीइ skको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईले चेरी फूल, काई घाँस र नेमोफिला देख्न सक्नुहुन्छ
लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरूमा ट्राफिक जामबाट सावधान हुनुहोस्
यदि तपाईं अप्रिलमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरबाट छवि क्लिक गर्नुहोस् अधिक जानकारीका लागि।
सामान्यतया, जापानी द्वीपसमूह हरेक वर्ष अप्रिलमा वसन्त प्रवेश गर्दछ, तर केहि स्की रिसोर्टहरू होक्काइडो र होन्शुको हिमाली क्षेत्रमा संचालन गर्न जारी राख्छन्। यहाँ, तपाइँ वसन्त स्कीइंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं बच्चाहरूसँग यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्लिड्डिंग वा स्की स्लोपमा हिममा केवल खेल्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। वसन्त स्कीइ winter जाडो स्कीइ somewhat भन्दा केही फरक छ। जाडोमा तपाईं सम्भावित धेरै चिसो मौसममा स्की गर्नुहुनेछ। यसको विपरित, वसन्त theतुमा तापक्रम थोरै तातो छ। स्की रिसोर्ट बाहिर बाहिर हिउँ चाँडो पग्लिहाल्छ र कहिलेकाँही सडकहरू र तपाईंको होटेल वरपरका क्षेत्रमा थोरै हिउँ हुन्छ। तपाईं स्की गर्न सक्नुहुनेछ, जबकि नजिकै हरियालीको मजा लिन।
स्की रिसोर्टहरू पनि प्राय: अप्रिलमा वर्षा हुन्छ। तपाईं सजिलैसँग हिउँद foundतुमा फेला परेको धेरै हिउँदे दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्न। यदि तपाईंलाई स्कीवियर चाहिन्छ भने, तपाईंले भाडा सेवा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यद्यपि तपाईलाई यस समयमा धेरै बाक्लो कपडाको खाँचो पर्दैन।
प्रतिनिधि स्की रिसोर्टहरू जुन हरेक अप्रिलमा अपरेट हुन्छ यो निम्नानुसार छ। त्यहाँ धेरै स्की रिसोर्टहरू छन्, तर म व्यक्तिगत रूपमा होकाइडो र नाकुनो प्रान्तको हकुबा गाउँ (हकुबा 47 XNUMX, हप्पो-वन) मा निसेको सिफारिस गर्दछु। यदि तपाईं एक उन्नत स्कीयर हुनुहुन्छ र विशिष्ट स्की मौसम पछि स्कीइ enjoyको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म यामागाता प्रान्तमा गसन स्की रिसोर्ट सिफारिस गर्दछु।
निसेको अन्नुपुरी अन्तर्राष्ट्रिय स्की रिसोर्ट
सप्पोरो अन्तर्राष्ट्रिय स्की रिसोर्ट
Asahi-dake रोपवे स्की रिसोर्ट
किरोरो हिउँ विश्व
जाओ ओन्सेन स्की रिसोर्ट
अप्पी-कोजेन स्की रिसोर्ट
Hoshino रिसोर्ट Nekoma स्की रिसोर्ट
Gassan स्की रिसोर्ट (अप्रिलको सुरुमा खुल्छ र जुलाई सम्म खुल्ला हुनेछ। कृपया निम्न भिडियोमा सन्दर्भ गर्नुहोस्)
कन्तो क्षेत्र, Chuu क्षेत्र
मारुनुका कोजेन स्की रिसोर्ट
नाएबा स्की रिसोर्ट
गाला युजावा स्की रिसोर्ट
Nozawa Onsen स्की रिसोर्ट
हाकुबा Winter 47 शीतकालीन खेल पार्क
हाकुबा हप्पो-वन स्की रिसोर्ट
त्सुगाइके कोगेन स्की रिसोर्ट
अकाकुरा स्की रिसोर्ट
शिगा कोगेन स्की रिसोर्ट (टाकामागारा, Ichinosu)
टटेयामामा हिउँ पर्खालहरू पनि हेर्न सिफारिस गरिन्छ
अप्रिल १th देखि, मैले अर्को पृष्ठमा भनेझैं तपाईं विशाल हिउँ पर्खाल हेर्न केन्द्रीय होन्शुको तात्यामा जान पनि सक्नुहुन्छ। यी हिउँ पर्खाल जुन सम्म देख्न सकिन्छ। यदि तपाईं स्की रिसोर्टहरूको बाहिर हिमाली दृश्यको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म यो हिउँ पर्खालको सिफारिश गर्दछु। तातेयामाको आधिकारिक वेबसाइट निम्नलिखित छ:
उत्तरी होन्शु र होक्काइडोमा अप्रिलको मध्यदेखि चेरी फूलहरू बग्न थाल्छन्
अप्रिलमा, तपाईं जापानमा विभिन्न फूलहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जापानको प्रतिनिधि फूल चेरी ब्लाम्सले मार्चको आखिरमा क्युशुमा उनीहरूको फक्रने चक्र सुरू गर्दछन्। साकुरा मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिलको सुरुदेखि होन्शुका मुख्य शहरहरू जस्तै टोकियो, क्योटो र ओसाकामा खिलिएका छन्।
तपाईं टोकियो इत्यादिमा चेरी फूलहरू देख्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईं यस विशेष खिलिएको हप्ता वा यस्तै मेल गर्न आफ्नो यात्रा समय दिन सक्नुहुन्न। यो ठीक छ किनकि चेरीको फूलहरू उत्तरी होन्शु र होक्काइडो पछि पनि फल्न थाल्नेछन्। यदि तपाईं चेरी फूलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि उत्तरी होन्शु र होक्काइडोलाई तपाईंको यात्रा कार्यक्रममा थप्नुहोस्। तलको तालिकाको अनुसार चेरी फूलहरू उत्तरी होन्शु र होक्काइडोमा प्रत्येक वर्ष खिलछन्।
औसत वर्षमा फूल फुल्ने मिति
सप्पोरो मे तेस्रो तिर
Hakodate अप्रिल 30 को आसपास
एमोरी अप्रिल २ around को आसपास
मोरियोका अप्रिल २१ को आसपास
अप्रिल १ around को आसपास अकिता
Yamagata अप्रिल १ around को आसपास
११ अप्रिलको आसपास सेंडाई
अप्रिल around को आसपास फुकुशिमा
व्यक्तिगत रूपमा, म विशेष गरी चेरी फूलहरूको सिफारिश गर्न सक्छ हिरोसाकी शहर, अओोरी प्रान्तको हिरोसाकी महलमा। यस परम्परागत महलमा खिलिएका चेरी रूखहरू एकदम राम्रा छन्।
घाँस चेरी ब्लास्म्स र नेमोफिला हेर्नका लागि हेरौं!
जब चेरी खिलने मौसम होन्शुका मुख्य शहरहरूमा समाप्त हुन्छ, यस पटक शिबाजाकुरा (घाँस चेरी ब्लास्म्स) र नेमोफिला फूलहरू तिनीहरूको चरम शिखरमा छन्।
म विशेष रूपमा निम्न ठाउँमा फूलहरूको सिफारिश गर्दछु। चेरी खिलने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सुन्दर फूलहरू चारै तिर फुलिरहेका छन् र शानदार पनि छन्। यदि तपाईं यी समयमा जापानको लागि यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया यसलाई तपाईंको यात्रा कार्यक्रममा थप्नुहोस्।
सिफारिश गरिएका स्थानहरू
हिटाची समुद्री किनार पार्क (Ibaraki प्रान्त)
नेमोफिला यहाँ सुन्दर छन् अप्रिलको लेटदेखि मध्य मेमा। बलात्कारका फूलहरू र ट्यूलिपहरू पनि यहाँ अप्रिलमा खिलछन्। तल हिताची कैहिं पार्कको आधिकारिक वेबसाइट छ।
फुजी मोटोसु ताल रिजोर्ट (यामानशी प्रान्त)
माउन्टको वरपर फुजी, घाँस चेरी फूलहरू सुन्दर छन् हरेक वर्ष मध्य अप्रिल देखि लेट मे सम्म। माउन्टसँग पृष्ठभूमिमा फुजी, एक अद्भुत परिदृश्य सिर्जना गरिएको छ। तल फुजी मोटोसु लेक रिसोर्टको आधिकारिक वेबसाइट छ।
जापानी द्वीपसमूह मा धेरै स्थानहरु अप्रिल मौसम मा आनन्द लिन को लागी धेरै सजिलो छ। मैले माथि प्रस्तुत गरेको स्थानहरूमा मात्र होइन तर अन्य धेरै टूरिष्ट स्पटहरूमा पनि तपाई रमाइलो समय दिन सक्नुहुनेछ।
यद्यपि त्यहाँ एक चीज छ जुन तपाईंले दिमागमा राख्नु भएको छ: ट्राफिक जाम। जापानी मानिसहरु अक्सर अप्रिल मा जापान मा दर्शनीय यात्रा को लागी यात्रा। यसका साथै, जापान भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको संख्या वर्षौं बर्ष बढ्ने भएकोले प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरू एकदमै भीडभाड छन्।
उदाहरण को लागी, मेरो मित्रले भारी ट्राफिकको अनुभव गरे जब टोकियो बाट माउन्टमा काईको ढलान हेर्न जाँदै थिए। फुजी यातायात को कारण, यात्रा मा पुग्न सात घण्टा लाग्यो। यदि तपाईं टोकियोबाट एक दिनको यात्रामा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलहरूमा जानुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं सकेसम्म चाँडो बिहान जानुहुन्छ।
जापानमा, इलिमेन्टरी स्कूल र जूनियर हाई स्कूल मार्चको अन्तदेखि अप्रिलको सुरूमा छुट्टीमा छन्। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै परिवारहरू यस समयावधिमा भ्रमणका लागि यात्रा गरिरहेका छन्। अप्रिलको अन्त्यदेखि मेको सुरूसम्म त्यहाँ लामो छुट्टी अवधि हुन्छ जुन "गोल्डन वीक" भनिन्छ। यस समयमा, प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलहरू विशेष गरी भीड भएका छन् त्यसैले सावधान हुनुहोस्।